Ezinamacala wocingo, Screw Nail, Isefu Concrete kwalenza - YouYou
U isikhonkwane esiqhelekileyo
Isipikili seNtsimbi emnyama
Yenziwe ngetyheli yeentsimbi
Isikhonkwane esiqhelekileyo socingo
Intloko yentsimbi engenasihloko
Isikhonkwane sekhonkco esenziwe ngesinyithi
Isambrela sophahla lwentloko
Intambo encinci yeCoil
Ingcingo yeBlade Blade
Ucingo oluNtsundu oluMnyama
Ukumiselwa ngo-1989, Wena (weQela) iZinyithi ezibandakanya ukubaluleka okukhulu kulwandiso kunye nokuphuculwa komgangatho wemveliso kunye nezixhobo. Sihambele phambili ukuzoba ucingo lwasekhaya, ukwenza iinzipho, i-galvanization, unyango lobushushu, unyango lomphezulu kunye nezixhobo zokukhusela indalo, ezihlangabezana nemigangatho yesizwe yokukhuselwa kwendalo kwaye ikakhulu zibandakanyeka kwizipikili zesamente.
Eyona mveliso iphambili ibandakanya isikhonkwane esimnyama sensimbi, isikhonkwane sekhonkrithi, isikhonkwane esiqhelekileyo socingo, isikhonkwane sokuphahla, isikisi se-gypsum, isikrufu se-chipborad, ucingo olwenziweyo, ucingo olumnyama oluxutywe ngocingo, ucingo olutyhidiweyo lwe-pvc, ucingo olubiweyo, ucingo olucinyiweyo, ucingo olungenasici kunye neentlobo ezahlukeneyo zocingo, njl. Ithengiswa kakuhle kwilizwe liphela, iipesenti ezingama-70 zemveliso zithunyelwa kulo lonke ilizwe, ezinje ngeYurophu, iMelika, iAfrika, uMbindi Mpuma kunye noMzantsi Mpuma weAsia, njl.
Bonke abasebenzi bakaYeYou (Iqela) leZinyithi ngo-2020 bazabalazela ukufezekisa iinjongo ezingama-600 ezigidi ze-yuan ngonyaka ngexabiso lokuphuma lonyaka kwisithuba seminyaka emithathu ngolindelo kunye nothando.
Ungayikhetha njani i-drywall screw
Izitudiyo ze-DRYWALL ziye zangumlingo kwaye zinde kubomi bethu bemihla ngemihla. Zazisetyenziselwa ukwakhiwa kwezindlu ezikumgangatho ophezulu kunye nolwakhiwo lobunjineli, kodwa ngoku zikwayenye yezona zinto zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwizinto zokwakha, umzekelo, kufuneka silungise izinto kubomi bethu bemihla ngemihla. Kwizinto ezizinzileyo ngaphambi kokuba senze n ...
Ngophuhliso oluqhubekayo lwetekhnoloji, imigca ebunjiweyo kule minyaka idlulileyo inophuhliso olutsha, umgca we-galvanized ukuvela kwenkqubo yokubuyisela ubushushu kwinkunkuma, nakwimigca ethile yemveliso. Isithando somlilo esine-tube eqaqambileyo yokufudumeza ngokungangqalanga, ipetroli etshiswa yityhubhu eqaqambileyo itshisa g ...
Inkqubo yokuThengiswa kweNzipho
Inkqubo yokuvelisa isikhonkwane ubukhulu becala kukuzoba, isihloko esibandayo, ipolishi kunye nezinye iinkqubo. Imveliso yeenzipho eziluhlaza yidiski, oko kukuthi, idiski yentsimbi, emva kokuzoba ucingo, ikhuphe idayim ye-Nail Rod, emva koko emva kokubanda okubandayo, umsila wesikhonkwane kunye nencam, emva koko ipolishi, oko kukuthi ...
Iingcebiso - iveliso ezifakiwe - Imephu yendawo - Indawo ekuSelfowuni